October 2018 – Tahir Kasim
Akkam oltan yaa Oromoo qomoo koo!!
Jalqaba irraatti nuti ummatni Oromoo waggaa 150 oli cunqurfamne qabsoo karaa nagaatin gageessaa turre jirra bara rakkoo hammata hedduu abbootin keenyaa nutis dhalootni qube amma waqaayyon nu jiraachise keessaa argine dabarsiine jirra. Amma garuu ifaa xiqqaa argine jirra, ifaa amma nuti arganne kana gama diina, warra jibbaa nuf qabanii fi bara garbumma nuti dheeressanif kun itti hin tolu. Kanaafu nuti dhaloonni amma jechuun qerroon fi qarree gachana saba Oromoo kan taane kana hubbanne tasgabba’un abboti keenyaa bara rakkoo keessaa dabrani as gahan dhageeffachun, waan isaan hin elaamefidhan waliin dubbachun ifaa kana ballifachuu qabna je’a.
By Tahir Kasim October 18, 2018 99 WordsLeave a comment
By Tahir Kasim October 13, 2018 0 WordsLeave a comment
Akkuma marri keenya beeknu sochiin amma dhufee lammii qubee barateni kanaafuu sochii kana fudhate deemu kan danda’u nama qube barate dabalatas name baayyee dubbisee fi aada ummaticha sirrii gad-fageenyan kan beeku ta’u qaba. Garuu, wanti amma Oromiyaa keessatti ta’a jiru faallaa kanati. Kana booda qube jenereshiini kana soban miliiqu hin danda’amu. Hoggansii ol’aanoon Oromiyaa irraa jirtan furmaata hawwara waan barbaadani irratti fala kenna deemu qabdu, waan qorannoo barbaadu jabaatani qorannoo gaggessaa jiraachuu keessaan ofishaali ifa gochuu qabdun jedha. Adeemsi keessaan ifa yoo hin goone waanuma haromsaan dura gaggeffama turetti waan deebi’e fakkata.
Dabalatas dhimmi nannooleen ofiin of-bulchuu ammalle hin mirkanoofne kun immoo taatewwan adda addaa bakka adda addaati mul’aata jiru agarsiistudha. Innis humni raayyaa ittisa biyyaa mormii fi rakkoo xiqqoo humna nageenya naannootin tasgaaba’u danda’uu humni rayyaa ittisa biyyaa rakkootti rakkoo dabalaa jira. Kun immoo deeme deemee gara ta’u hin qabnetti deema jira. Du’aatin ilmaan Oromoo ammalee Oromiyaa keessaa hin dhaabbanne. Humna meeshaa waraana baate aada fi duudha ummaticha hin beekne ummata keessaa gaafa seene rasaasa robsuu malee waan hojjata jiru hin beeku, kana immoo yeroo lama nan qunname ture. Nama nagaadhan konkolaatan deemutti dhukaasa banun namoonni yegguu lubbuf jechaa kaachan rasaasan rukkutun lubbuu namoota heddu galaafata jiru. Kanaafuu giddu-galeessuman Aangoo naannoo eegsiifachun kan hoggansa naannooti.
By Tahir Kasim October 13, 2018 206 WordsLeave a comment
ዛሬ 2/2/2011 በዶክተር አብይ ትውልድ አገር አጋሮ ከተማ በመካለከያ በሰላማዊ የቄሮ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ለመጠየቅ በወጣው ህዝብ ላይ ተኩሶ ሁለት ሰው ህይወት አልፎአል፡፡
har’a 2/2/2011 mormii fi gaffii haaromsa fi bulchiinsa gaarii karaa nagaa fi qindaa’en gaafataa turaanitti humni ittisa biyyaa nama nagaa doqdoqqen deemu rasaasan rukkutun nama lama battalumatti lubbun isaani darbee jira.
By Tahir Kasim October 12, 2018 30 WordsLeave a comment
By Tahir Kasim October 4, 2018 October 4, 2018 37 WordsLeave a comment